Sahara Rabearisoa : Nofatoran’ny volan-dRajoelina -
AccueilRaharaham-pirenenaSahara Rabearisoa : Nofatoran’ny volan-dRajoelina
02/11/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Mafy ihany ity mivavaka amin’ny vola ity, ary mahavita « mivaro-tena » mihitsy ny mpanao politika noho izay resa-bola izay. Nanao fanambarana ny kandidà Sahara Rabearisoa, fa hanohana ny kandidà Andry Rajoelina, ny fihodinana voalohany anefa mbola tsy nanomboka akory. Nofatoran’ilay 250 Tapitrisa natao antoka nahafahana nilatsaka hofidina, izay raha ny marina no tao ambadik’ity raharaha ity, tsy nisy fanapahan-kevitra goavana noraisina velively izany, efa izay hatrany am-boalohany.
Notsipahan’ny antoko Maitso tsy ho filohan’izany antoko izany intsony i Sahara Rabearisoa, noho ny antony tsy dia mahafinaritra loatra ny miresaka azy eto amin’ny gazety. Nahazo vato 4,5% izy tamin’ny fifidianana filoham-pirenena ny taona 2013 noho ny maha kandidà avy amin’ny antoko Maitso ny tenany. Izay no antony nandrotsahan’i Andry Rajoelina azy ho kandidà amin’ity fifidianana filoham-pirenena ity, mbola manantena ny hahazo io vato 4,5% io. Aza hadinoina fa nandeha « nivaro-tena » tany amin’ny ARMADA i Sahara Rabearisoa, izay mpanenjika ny fitondrana Tetezamita taorian’ny fifidianana ny taona 2013.
Nampametra-panontaniana ny maro ihany mantsy ny fananan’ireo kandidà sasantsasany ireo ilay vola 250 Tapitrisa natao antoka. Mba fantatra daholo ihany ny mombamomba azy ireny, ny fiainany andavanandro, ny asany, sns. Manomboka mazava ankehitriny ny famatsiam-bola nahafahan’ireo kandidà sasantsasany nirotsaka tamin’ity fifidianana ity. Ho hita amin’ny faha-7 novambra moa hoe firy isan-jato marina tokoa ny vato mba ho azon’izany Sahara Rabearisoa izany, ary mety hanome fahafaham-po ny tompom-bola koa ve!
Kandidà 21 Fanombohana hafa kely Taorian’ ny fahataperan’ny fe-potoana 24 ora nomen’ireo firaisan’ny kandidà 21, dia tetsy amin’ ny kianjan’Ambohijatovo izy ireo no nihaona tamin’ny vahoakan’ Antananarivo. Tamin’ izany no nanohizan’izy ireo ny fitakiana ny ...Tohiny